नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): अमेरिकामा पहिलो पटक डिसी नेपाली समाजले आयोजना गरेको जनै पुजन् तथा रक्षा बन्धन कार्यक्रम यस्तो रह्यो हेर्नुस् !
अमेरिकामा पहिलो पटक डिसी नेपाली समाजले आयोजना गरेको जनै पुजन् तथा रक्षा बन्धन कार्यक्रम यस्तो रह्यो हेर्नुस् !
यो सुन्दा सानो लाग्ला तर नेपाली सँस्कृति र परम्परालाई माया गर्ने हरुका लागि ठुलो र सुखद समाचार हो, यसका लागि डिसी नेपाली समाज धन्यवाद र बधाई को पात्र छ । समाज र यसका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई नेपाल मदर डट कम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ । हेर्नुस् फोटो र भिडियो आँफै समाचार बोलिरहेका छन ।
हेर्नुस् फोटो एल्बम भित्र आएर ......
कार्यक्रममा नेपालका एक जना हजुरबुवा डिल्लीरमण शर्मा अर्याल जो छन्दमा अत्यन्त राम्रो कबिता लेख्न माहिर हुनुहुन्छ वहाँले यसरी २ कबिता पनि सुनाउनुभयो ।